Sida loo sameeyo ninka jaceylka WhatsApp | Niman qurux badan
Sida loo sameeyo nin jaceylka WhatsApp
Alicia tomero | 14/11/2021 22:32 | Lamaanaha iyo Galmada, Tiknoolaji
WhatsApp ayaa noqotay mid ka mid ah shabakadaha bulshada ee aadka loo isticmaalo waxaadna fursad noo siinaysaa inaan awoodno inaan la xiriirno dadka aan hadda la kulannay. Haddii aad sidoo kale rabto in aad wax badan ka sii dheeraato, codsigan kuu ogolaanayaa inaad ka adkaato qofkaas in aad jeceshahay oo aad awoodid in aad xiriir aad rabto la yeelato.
Haddii aanad khibrad badan u lahayn diritaanka fariimaha ama aanad garanayn sida looga falceliyo, waxaanu ku siin karnaa xoogaa talooyin ama furayaal ah si aad u awooddo. ninkaas aad jeceshahay ka qabso. Uma baahnid inaad noqoto qof kale, laakiin isku day inaadan noqon qof wax qanciya, ogolan ama taxaddar la'aan. Kaliya noqo mid waxtar leh si aad u sameyso ilaali dheelitirka aad jeceshahay.
1 Sida loo sameeyo nin ku dhaca jacaylka WhatsApp?
1.1 Waxay qaadanaysaa wakhti in jawaab loo diro
1.2 Sidee bay fariimaha u noqonayaan?
1.3 Hayso sirta ilaa aad shakhsi ahaan u kulmayso
1.4 Maxaa ku saabsan emojis?
1.5 Weligaa ha weydiin sharraxaad
1.6 Dan u yeelo isaga, laakiin adoon canaanan
1.7 U muuji shakhsiyaddaada sida aad tahay
Sida loo sameeyo nin ku dhaca jacaylka WhatsApp?
Si aad ugu hadasho codsigan waa lama huraan Hayso lambarka taleefanka qofka kale. Si dhab ah u bixinta lambarku waxay ka dhigan tahay in mustaqbalka fog nooc xiriir ah la samayn doono, iyo inta badan, WhatsApp. Hadday taasi sidaas tahay, waa sababta qofka kale ayaa ku xiiseeya waxaana hubaal ah inaad sugi doontaa xidhiidhka noocaas ah.
Waxay qaadanaysaa wakhti in jawaab loo diro
Haddii uu yahay kan qaaday tallaabadii ugu horreysay ee qoraal ah, isticmaal qalabka qarsoon ee waqti qaado si aad uga jawaabto. Waanu ognahay inaad diyaar u tahay inaad wax sheegto, laakiin uma muuqan kartid sidii naag quus ah. Haddaad u ogolaatay hakiyay muddo dheer, hubaal waxay rabaan inay dareenkaaga soo jiitaan oo ku raadiyaan fariin kale.
Haddii, dhanka kale, ay ahayd adiga oo soo diray farriintii ugu horreysay, waa inaad is-tustaa naxariis, laakiin aan xiiso lahayn. Waa inaad ogaataa inaadan ahayn qof dumar ah oo aad u daacad ah markii ugu horeysay oo aanad sugin maalinta oo dhan si aad u aragto fariimaha ay soo gudbiyaan.
Sidee bay fariimaha u noqonayaan?
Farriimaha waa inay ahaadaan cad oo farxad leh. Ha ku dhaafin sharraxaad aad u dheer, ragga ma jecla inay wax akhriyaan aad u dheer. Waxaad dareenkooda ku heli kartaa adigoo qoraya jumlado gaagaaban, in ay leeyihiin asal iyo in la majeerto marka ay akhrinayaan. Taabasho qosol leh oo leh hawl yar oo qosol leh ayaa sidoo kale aad uga farxin doonta isaga.
Waxay jecel yihiin inay yeeshaan sheeko farxad leh, ma aha inaad u sheegto sida maalintaadu u xumaatay oo ha noqon mid aad u qalbi jaban. Kuwa ugu fiican ayaa ah fariimo kedis ah iyo kuwo aan caadi ahayn kana digtoonow inaad dirto memes ama muuqaalo qosol leh, laga yaabee inuusan wali fahmin kaftankaga.
Hayso sirta ilaa aad shakhsi ahaan u kulmayso
Ha siin furayaal badan sida aad tahay, ama u soo dir sawiro haddii uu weyddiisto. Xitaa ka sii badan haddii uu ku weydiiyo inaad ku tababarto qoaal, maadaama waxa uu rabo uu yahay in uu kor u qaado egodiisa oo leh sawirka jidhkaaga oo qaawan. Haddii aanad kalsooni badan qabin ha ku dhicin dhaqanka dirida sawirada haddaadan runtii isaga garanayn. Marna ma ogaan kartid sida aad sawirkaaga ugu isticmaali karto baraha bulshada.
Maxaa ku saabsan emojis?
Waxay matalaan shucuurteena iyo waa madadaalo iyo waxtar. Laakin aad ha u isticmaalin iyaga, waxay ku siin kartaa dareen caruurnimo. Mararka qaarkood dhawr si aanay weedhadu u furnayn markaad qorayso. Emojis caawin muujinta dareenka weedhaas aad gudbinaysay, laakiin kaliya si gaar ah.
Weligaa ha weydiin sharraxaad
Haddii ay ku dhaawacdo in ay waqti ku qaadato in aad ka jawaabto ama ay dhammayn waydo u dhigma fariimaha, ha quusan. Ku ilaali booskaaga inaad sugto oo ha ku dhufan isaga oo wata farriimo ay ku siinayaan sharraxaad. Rag badan ayaa waqti ku qaata in ay ka jawaabaan, naag degdeg ah ayaa ku soo rogi karta. Ma kula tahay inuu adiga uun kula joogo mise waxa uu ku ciyaarayaa dareenkaaga? Marka shaki la galo ha ka walwalin, sug oo is deji. Kaliya faahfaahinta ayaa ku siin doonta nooca qofka uu yahay iyo ujeeddooyinka uu muujinayo jacaylkiisa.
Dan u yeelo isaga, laakiin adoon canaanan
Dhammaanteen waxaan jecelnahay in nala dhegeysto iyo inay la xiriiraan dareenkayaga. Raggu waxay noqon karaan kuwo si qoto dheer u soo gala markay timaaddo ka sheekaynta maalintooda maalinba maalinta ka dambaysa, ama sida ay si fudud u dareemayaan, gaar ahaan marka aanay jirin kalsooni badan. Haddii uu kuu soo jeediyo inuu wax kuu sheego, dhegayso isaga, aad bay u mahadsan yihiin marka ay jirto qof dumar ah oo ka caawisa inay talo siiyaan.
U muuji shakhsiyaddaada sida aad tahay
Tani had iyo jeer waa talada lagu qeexay bilaw kasta oo soo jiidasho yar ama dareen. Ha iska dhigin inaad tahay nooc kale oo qof ah waayo aakhirka waa la ogaan karaa. Soo hel noocaaga ugu fiican oo u cajab galiya isaga, ugu yaraan ilaa taariikhdaada koowaad. Si la mid ah sawirada, ha isku dayin inaad ku guulaysato sawir aad loo taabtay, u muuji naftaada sida dabiiciga ah ee aad awoodid.
Iyo wixii ka sarreeya barato macsalaama oo macsalaamo haddi aanad xiiso badan muujinin. Ha isku dayin inaad hesho wax aan isku jihayn kuu gariirin, malaha waa nin u baahnaa cid daboolaysa Deficiency niyadda oo kordhi aad ego. Sidaa darteed, waa inaad kala saartaa fikradahan si aadan wax walba u siin.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Ku habboon » Lamaanaha iyo Galmada » Sida loo sameeyo nin jaceylka WhatsApp
Sida loo labbisto qaabka
Sidee lagu ogaan karaa inuu nin kugu daalay iyo in kale